Ogaden News Agency (ONA) – Daawo: Hogaanka Warfaafinta JWXO oo Bixiyay Waraysi Dheer oo Xaasaasi ah.
Daawo: Hogaanka Warfaafinta JWXO oo Bixiyay Waraysi Dheer oo Xaasaasi ah.
Warbaahinta caalamiga ah ee BNN oo fadhigeedu yahay wadanka Maraykanka ayaa waraysi dhinacyo badan taabanaya layeelatay Gudoomiyaha Hogaanka Warfaafinta JWXO Mudane Xassan Macalim.
Waraysiga hogaanka lalayeeshay oo Afka Axmaariga kubaxayay ayuu wariyuhu hogaanka waydiiyay su’aalo aad ubadan oo laxidhiidha halgamadii wadanka Ogadenia iyo sooyaalkii taariikheed ee halganka shacabka Soomaalida Ogadenia.
Hogaanka warfaafinta JWXO mudane Xassan Macalim oo kajawaabayay su’aal ahayd sababta loo aas’aasay ONLF ayaa sheegay in shacabka Soomaalida Ogadenia ay mudo dheer halgan kujireen kahor aas’aaskii JWXO, wuxuuna hogaanku sheegay in halgankii Jabhadii WSLF kadib ay shacabku dareemeen baahida looqabo xoriyad ay helaan shacabka ree Ogadenia.
Mudane Xassan Macalim oo hadalkiisa siiwatay ayaa sheegay in aqoonyahano dhalinyaro ah oo wadanka udhalatay ay kasoo maaxatay figrada ah in lahelo halgan towri ah oo iskutashi ah oo kamadax banaan noockasta oo taageero kabaxsan mida shacabka Soomaalida Ogadenia.
Hogaanka ayaa intaas raaciyay in dhalintu ay 1984 bishii Aug aas’aaseen Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia JWXO oo si rasmi ah umatali doonta shacabka Soomaalida Ogadenia ee gumaysigIi dhargiga kuhoos jiray.
Sidoo kale hogaanka oo kajawaabayay su’aal ahayd goormaad dagaalka bilowdeen maxaadse ubilowdeen ? Ayaa kujawaabay, Jabhada ONLF iyo shacabkeedaba dagaalka waa lagu qasbay wuxuuna dagaalku ahaa mid aan mudo ka warwareegaynay hase yeeshee waxaa ciidanka Jabhada ONLF iyo shacabka Soomaalida Ogadenia weerar qaawan kusoo qaaday taliskii wayaanaha oo xiligaas ahaa KT Malis Zinawi.
Hogaanka oo hadalkiisa siiwatay ayaa sheegay in ciidanka wayaanuhu ay weerar qaawan kuqaadeen gudoomiyihii Jabhada ONLF halgame Sheekh Ibraahim Cabdale oo xiligaas kormeer howleed kujoogay magaalada Wardheer, waxaase ciidankii wayaanaha sutida uqabtay ciidankii gudoomiyaha lasocday iyo shacabkii ree Wardheer waxaana maalinkaas anaga naga dhimatay in kabadan 80 qof oo sharafta umada difaacaysay halka qawmiyada Tigree ay goobta kaga qudh baxday 89 askari.
Sidoo kale hogaanka warfaafinta JWXO mudane Xassan Macalim ayaa sheegay in Jabhada ONLF ay kutimid doorashada shacabka wuxuuna sheegay in doorashadii wadanka kaqabsoontay ay Jabhadu kuguulaysatay 84% taas oo ahayd doorashdii ugu horaysay uguna dambaysay ee shacabka Soomaalida Ogadenia si xor iyo xalaal ah u galaan.
Sidoo kale hogaanka ayaa sheegay in Jabhada ONLF ay dhinaca dagaalka iyo dhinaca bulshadaba kagaadhay guulo waawayn mudadii uu halganku socday.
Dhinaca kale wariyaha warbaahinta BNN ayaa hogaanka waydiiyay isbahaysiga PAFD iyo faa’iidada ONLF ugu jirta wuxuuna mudane Xassan sheegay in isbahaysigu uu muhiim uyahay dhamaan dadka lagumaysto wuxuuna sheegay in ay isu bahaysteen sidii looxorayn lahaa shucuubta lagumaysto.
Lasoco qaybta 2aad ee waraysiga.